Matipi eVashandisi veWindows Vanoda Kutanga paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | GNU/Linux, Resources, Windows
Pane dzakawanda nguva isu takaratidza mamwe ma distros anotaridzika akafanana ne macOS, kana ne tarisa kufanana ne Microsoft desktop Windows. Asi ino nguva chimwe chinhu chinonyanya kushanda kupfuura icho, sezvo iri gwara rakazara kune zvese izvo vashandisi veRedmond chikuva vanofanira kuziva kuve nekukurumidza uye nyore kuchinjira kune nyowani GNU / Linux distro.
Neichi gwaro, iwe haugone chete kuziva kugovera uko kungave kuri nyore kwauri, asi zvakare mamwe maqhinga uye mazano izvo zvinogona kuenda zvisingazivikanwe nevakawanda, asi izvo zvinogona kudzikisira kuwanda kwebasa mukugadzirisa kwako, uye kunyange kukutadzisa kuti usadzokere mumachira eWindows sezvinoitika kune vamwe vanoedza kuyedza Linux uye nekukurumidza vadzokere kune yavo yekare sisitimu…
2.2 Pane here dzimwe nzira dzekushandisa maWindows?
2.3 Ko kana pasina imwe nzira? Ndinogona here kushandisa yangu yemuno Windows app paLinux?
2.4 Ndinogona here kuwana makomputa neLinux akaiswa kumberi seWindows?
Kusiya Windows e enda wakananga kuGNU / Linux pane zvakawanda zvikonzero. Kunyangwe chiri chokwadi kuti vashandisi vazhinji vakasungirirwa zvakanaka muWindows netsika kana zvinoenderana nenyaya, kunyanya pamitambo yemavhidhiyo. Asi kana uine kusahadzika uye uchida zvimwe zvikonzero zvekufunga kutora leap:
Centralization inokushungurudza iwe? Edza siyana siyana. Sezvakaita macOS, Microsoft ine yakazara kutonga kweWindows kuvandudza. Ndosaka paine kungonaka kamwe chete kwayo, ndinoitora kana kuisiya. Kune rimwe divi, kune huwandu hwakawanda hwekuparadzirwa kweGNU / Linux kuti usarudze iyo yaunoda zvakanyanya kana inokodzera zvakanyanya zvaunoda. Ichokwadi kuti izvi zvinounza kupatsanurwa, asi huwandu hwevashandisi vanogutsikana hunozvikoshesa.
Kugadzikana, kusimba, uye kuita. Windows yakagadziridzwa mune izvi mumakore achangopfuura, kunyanya neWindows NT kernel. Asi ichiri kure ne * nix masisitimu. Uye kana tikatora semuenzaniso Windows 10 inoita kunge ichakundikana nekuda kwekuvandudza, matambudziko anokura kune ayo eRedmond. Mumagadziriso ekupedzisira pave paine matambudziko akawanda akamanikidza Microsoft pachayo kuti idzokere pasi pamwe neyakagadziridzwa. Zvizhinji zvave kutaurwa nerunyerekupe pamusoro pezvinogona kukonzera zvikonzero, asi zvinotyisa… Iyo yekuvandudza system yeese distros haina kukanganisa, asi zvirokwazvo haina kunetsa sezviri kuitika muWin10.
Save. Kunyangwe paine zvakawanda zvemahara zveWindows uye zvakare mazhinji emahara mapurojekiti ayo anowiriranawo nepuratifomu iyi, chokwadi ndechekuti kubhadhara masutu senge Hofisi, Photoshop, uye zvimwe software zvinowanzo shandiswa papuratifomu hazviuye zvakachipa. Iwe unogara uine mukana wekubira, asi izvi zvine matambudziko maviri anoenderana:
Izvo hazvisi pamutemo, saka kana uchizviita iwe unofanirwa kuziva kuti unozviita pasi pebasa rako uye uchifunga mhedzisiro yacho.
Inosanganisira njodzi dzekuchengetedza, nekuti makatsemuka mazhinji, ma keygen, uye vamwe vane hutachiona kana kushandisirwa kuunza malware mune yako system. Uye zvakare, ivo vanowanzokumbira iwe kuti uvamhanye semubati uye kumisa iyo antivirus ...
Chengetedzo. Windows 10 yakachengeteka kupfuura shanduro dzekare, kusvika pari zvino ndinofunga tinogona kubvumirana. Asi * nix chikuva chakachengeteka zvakanyanya kupfuura Windows imwe kana pasina kuomesa basa raitwa. Linux yakachengeteka zvakanyanya nekuda kwezvikonzero zvakati wandei, asi kana iwe uchida imwe inorema usingapinde mune zvehunyanzvi ruzivo, zvinongova nekuti kuve sisitimu inoshanda nevashandisi vashoma, huwandu hwe malware uhwo hunangwa neLinux hwakadzikira zvisingaite. Uye zvakare kana iwe uchigonesa firewall mitemo ine iptables, kana kusimudza system senge SELinux kana AppArmor, nezvimwe, chengetedzo ichawedzera nenzira yakanyanyisa. Kune chimwe chinhu ndiyo sisitimu inosarudzwa nenzvimbo dzedata, makomputa, hurumende, mauto, nezvimwe. Haufungi iwe Ini handifunge kuti nemari yavanobata inongova nyaya yemalayisensi sekutaura kwevamwe ... handizvo? Pamusoro pezvo, kuvimba kwekugona kuongorora kodhi yekodhi chinhu chekutarisa kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge kuita.
Kuvanzika uye kusazivikanwa. Windows haina kumbobvira yakanaka mune izvi, uye ndeimwe yeanoshamwaridzika masisitimu anoshanda mune izvi. Asi nekuburitswa kweWindows 10 yatowedzera zvakanyanya. Yakave iri sisitimu inoshuma yakawanda yemushandisi dhata.
Kuita somunhu. Windows yakanyanyisa kuomarara, iyo yakatarisana neLinux. Kuti upe muenzaniso wakapusa, Windows inogona kufananidzwa neyakavakirwa simbi inoita kuti ichinje, nepo Linux ichiita sebhokisi repurasitiki raunogona kuumbiridza raunoda nekuda kwekuchinja kwaro.
Development. Windows ine huwandu hukuru hwekuvandudza software inowanikwa, uye akawanda mainjini emagetsi uye zvichingodaro zvinowirirana chete neWindows. Icho ichokwadi, asi Linux haina kutadza kuita mune izvi kana uye inonakidza kwazvo kune vazhinji vanogadzira. Iyo yakakwira kwazvo muzana iri kukura nekuwedzera inoshandisa Linux, kunyanya Ubuntu. Yakave imwe yeanofarira masisitimu ebudiriro.
Tsaona uye itangezve. BSoDs, kana bhuruu screens, mhosho mameseji, zvisingatarisirwi reboots nekuda kwezvikonzero zvakasiyana (kusanganisira zvinyorwa) zvakakonzera mabasa mazhinji kune vamwe vashandisi kurasika. Iko kushomeka kwekuita mune izvi ndizvo zvakakurudzira vamwe vashandisi kutsvaga yakasimba uye yakagadzikana chikuva senge Linux.
Zvakare Bhora riri padenga rako, uye unofanirwa kusarudza chikonzero kana zvikonzero zvinoita kuti uve nekutora danho rekupedzisira raunoda. Uye ndinovimba unopa Linux mukana wekukuratidza zvakwakanakira, uye kwenguva yakareba zvakakwana kuti ujaire uye kuti haupedze kudzokera kuWindows nekusajairana nayo sezvinoita vamwe vasingashiviriri vashandisi ...
Iwe uri Windows mushandisi uye uri kuzeza kuchinjira kuLinux. Chokwadi unayo chero kusahadzika kufamba nepfungwa dzako izvozvi uye izvo ndinovimba kugadzirisa pano ...
Es chimwe chinhu chaicho pachako mandisingagoni kubatsira kukuru kwauri. Mushandisi wega wega ndeimwe nyika uye ane zvavanoda. Naizvozvo, yakanyanya kunaka distro yekutanga muLinux ichave iri yaunonyanya kuda uye iyo yaunonzwa kugadzikana nayo. Nekudaro, heano mamwe mazano:
Ubuntu: kune vese vashandisi vanoda zvese kuti vangoshanda zvakanaka uye vasina matambudziko, chakanakisa ndechekuti sarudza Ubuntu. Iyo Canonical distro inounza nyore, kugadzikana, kusimba, chengetedzo, uye rakakura Hardware rutsigiro. Iyo ine hombe huwandu hwesoftware inowanikwa mune yayo repos uye kana iwe uine kusahadzika ndeimwe yeaya ane akanyanya tutorials pamambure.
Lubuntu: imwe flavour yakabva kune yapfuura iLubuntu, iyo iine LXDE desktop nharaunda ichaita senge Windows. Zvakare, kuve akareruka kunogona kuita yako yekare Windows muchina iyo isingachatsigire Windows kugadzirisa kuti ive mupenyu. Dhawunorodha Lubuntu.
Zorin OS: iri Linux distro yakanyanya kutungamirwa kune novice GNU / Linux vashandisi, uye kunyanya kune avo vanobva kuWindows nharaunda. Iwe unowana zvakawanda zvakafanana mune yayo interface uye hazvizokubhadharire iwe kuti ujairire kwazviri. Dhawunorodha Zorin OS
Linux mint: Kumwe kugovera kuri nyore kushandisa iLinux Mint. Iyo yazvino inoshanda sisitimu, ine huwandu hukuru hwezvishandiso zvekukubatsira iwe zuva nezuva-zuva hwaro kuti urege kuomesa hupenyu hwako uye yakanyanyisa kugadzikana uye yakapusa. Dhawunirodha Linux Mint.
Solus- Dhizaini yakamira yakanangana nekureruka kwekushandisa uye kwemushandisi wemumba. Chinhu chakafanana neWindows chingakufadze kubva panguva yekutanga. Dhawunirodha Solus OS
RoboLinuxUnogona here kufungidzira uine Linux distro inotaridzika yakafanana neWindows, uye zvakare inokwanisa kumhanyisa software yemuno pachikuva cheMicrosoft? Zvakanaka, usambofungidzira, ndiyo chirongwa cheRoboLinux, nekuti nekuda kwehunyanzvi inobvumidza iwe kuisa ako aunofarira Windows zvirongwa pasina dambudziko ... Dhawunirodha RoboLinux
Fenix ​​OS: Icho chirongwa cheSpanish chazvino chingachinjika chitarisiko chayo kunge chameleon kutevedzera iyo Windows desktop yaunonyanya kufarira, uye yaunogona zvakare kushandisa paRaspberry yako Pi. Dhawunirodha Fenix ​​OS.
fedora: Wakaneta nezvese zvinopaza muWindows, ipapo Fedora idombo rakasimba. Dhawunirodha Fedora
Linspire / Freespire: mamwe ma distros ekare akawanikwazve mune avo akabhadharwa uye emahara vhezheni zvichiteerana. Iyo inoshanda sisitimu iyo yaida kugadzirisa nyika yeLinux nechitarisiko chayo chakafanana neWindows uye nezvivakwa senge yayo CNR, kuisa nekamwe chete. Chinhu chisingaite senge chinhu chitsva, asi icho panguva iyoyo chaive shanduko muLinux nyika. Asi pachezvangu ini ndaikurudzira chero pamusoro apa zvisati zvaitika ... Dhawunorodha Linspire
Pane here dzimwe nzira dzekushandisa maWindows?
ZveGNU / Linux unogona vane zvisingaperi software zvinotsiva Uye kunyangwe mazhinji maapplication aunotoshandisa paWindows anozowanikwawo natively yeLinux, senge Firefox kana Chrome. Asi iwe unogona zvakare kuve neApple maapplication ane emulators, DOS maapplication nemapurojekiti senge DOSBox, vhidhiyo mitambo kubva kuRetro consoles, uye kunyangwe Mac maapps neDarling. Saka ndiani akati hapana software yeLinux?
A kanguva yapfuura Ini ndakaburitsa chinyorwa chine dzimwe nzira a Windows zvirongwa kuti pamwe iwe unogona kufarira ...
Ko kana pasina imwe nzira? Ndinogona here kushandisa yangu yemuno Windows app paLinux?
Iwe une zvinoshamisa Waini chirongwa, one kugadzikana rukoko kumhanya software (mashandisiro nemitambo yemavhidhiyo) yemuno kuchikuva cheMicrosoft paLinux. Inogona kushanda nemapurogiramu mazhinji, kunyange mamwe angave aine matambudziko kana asina mabasa ese. Asi inowanzoenda zvakanaka.
Uye kana izvo zvichiratidzika kunge zvidiki kwauri, unogona kugara uchitendeukira ku michina chaiyo kana iwe ukamhanyisa mune chero matambudziko nepamberi package. Kana tarisa dzimwe mhinduro kana dziripo, semuenzaniso, kunyange hazvo Microsoft Office isingawanikwe yeLinux, unogona kushandisa iyi Windows office suite mune yayo yepamhepo vhezheni yegore.
Uye usakanganwa kuti ivo varipo mapurojekiti senge Proton yakavakwa muValve's Steam mutengi kukuunzira iyoMitambo yemavhidhiyo yeWindows zvakare kuLinux usinganetseke nezve chero chinhu, uye uine hombe runyorwa rwemazita atoenderana zvizere ...
Ndinogona here kuwana makomputa neLinux akaiswa kumberi seWindows?
Hongu, unogona kuvawana. Kune vashambadziri vakati wandei vane izvo pakati pezvigadzirwa uye vamwe vanotengesa michina yeOEM pasina anoshanda system kana neyakareruka kuti ikubatsire kusarudza yaunoda (ona Non-OS kana FreeOS). Kana ari maAIO makomputa, malaptop uye desktops neako aunofarira GNU / Linux distro pre-yakaiswa, tinokurudzira iyo Spanish Slimbook. Ivo vanoonekwa nekuita kwavo, mhando, rutsigiro rwehunyanzvi uye dhizaini. Iwo akanakisa Linux makomputa pamunwe wako uye nemitengo yakanaka ...
Zvimwe zvinhu zvaunofanira kuziva kuita kuti zvive nyore kwauri kuti uchinje kune GNU / Linux distro, uye usanzwe kushamisa kana uchibva kuWindows nyika, ndeaya:
MAFUTA / NTFS: iwe unofanirwa kuziva kuti ese maFS kana mafomati anoenderana neGNU / Linux, saka kana uchifanira kugovana madhiraivha akaomarara, mapeni anotyaira, memori makadhi, nezvimwe, unogona kuzviita pasina matambudziko. Zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kugovana zvese nezvirongwa senge Samba kuva neheterogeneous network.
Kanganwa nezveEXE uye MSI: muWindows, sekune macOS, zvese zviri nyore uye zvishoma. Asi paLinux, nekuda kwehuwandu hwakawanda hwekuparadzanisa iwe hwaunowana kuwanda kwemapakeji akasiyana ayo asingafanire kukuvhundutsaSezvo zvazvino zvitoro zveapp zvinobvumidza iwe kuti uise nekamwe chete mbeva yako, uye mapakeji epasirese senge snap, Flatpak, uye AppImage vari kuchinja zvese izvo.
PowerShell: Iwe unofanirwa kuziva kuti kana iwe ukashanda kazhinji neiyi shell uye uri maneja akajaira iyo, kunyangwe kana ini ndisingazvifarire, unogona kuwana PS yeLinux natively kwenguva yakareba. Saka zero zero mune izvi.
Musiyano uripo pakati penyaya yepamusoro neyepasi. Chimwe chinhu icho muWindows chisina kuvhurwa nekutadza chiri kesi-inonzwisisika, uye mazita emafaira uye madhairekitori anozosiyaniswa pakati pepamusoro neakadzika kesi. PaWindows, panogona kunge paine faira rinonzi mhoro, uye raizozivikanwa seHELLO, hello, hello, nezvimwe. Panzvimbo iyoyo, muLinux ivo vese vanogona kuve vakasiyana, sezvo iri kesi inonzwisisika. Chinhu chakakosha pakuronga uye icho chinogona kukutendera iwe kuti ugadzire mamwe mazita akasiyana ...
Kamwe chete kana maviri. Kunyangwe iwe uchikwanisa kuimisa, kana iwe ukashandisa KDE Plasma inouya nekumisikidza yakagoneswa kuitira kuti ma icon avhurwe nekamwechete kudzvanya pane maviri senge muWindows. Asi ini ndinodzokorora, haina kuita senge mune dzimwe nharaunda uye muPlasma inogona kugadzirirwa kubaya kaviri.
Administrator vs Mudzi: muWindows hamuna mudzi kana superuser mushandisi, pachinzvimbo shandisa Administrator maakaunzi. Musiyano wakajeka waunogona kuwana pakati pezviviri isimba, nekuti mudzi une simba uye unogona kuita zvese. Kune rimwe divi, iyo Administrator account ine painogumira uye pane mamwe mabasa angave akavharidzirwa kana izvo zvaisingakwanise kuita.
Kunze kwemidziyo, hello mafaera. MuUnix zvese ifaira, zvakare nemidziyo. MuWindows une Drive C:, D:, E:, nezvimwe, pamwe nemaneja wedhizaina. Kune rimwe divi, muLinux, nekuda kwayo Unix nhaka, zvese faira (/ dev / sda1, / dev / loop, / dev / video,…). Chakanakira ndechekuti iwe unogona kushandisa maturusi ekushandisa mafaera nemidziyo iyi futi.
Services vs madhimoni. PaLinux uye imwe * nix iwe une madhimoni, ari mapurogiramu ari kuita sevhisi uye achimhanya kumashure. Izvi zvingave zvakaenzana.
Kanganwa WinPE. Iyi sisitimu yakanyanya kushomeka, nepo uri muGNU / Linux iwe uine iwo maLife ayo anotendera iwe kumhanyisa 100% inoshanda distro ine huwandu hwakazara (kusanganisira kudzoreredza dhata) kubva kune inobviswa svikiro senge pendrive kana USB ndangariro uye kunyangwe kubva kune optical medium (CD / DVD) kumhanya pasina kuisa kubva ku RAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Matipi eVashandisi veWindows Vanoda Kutanga paLinux
Kuverenga chinyorwa hakugone kubatsira asi kumira uye kuenda kuchikamu chino kunonyatsotaura kukanganisa mukati maro, pavanotaura nezveLubuntu uye kunongedzera kune yayo download link, saiti yavanotaura isiriyo (ndiyo yekare) iyo nyowani lubuntu .me, ndokumbirawo mugadzirise nekukurumidza.
Chokwadi, iyo saiti yepamutemo lubuntu.me